Vapristi vanotadza kudzidzisa vanhu (1-9)
Miromo yevapristi inofanira kuchengeta ruzivo (7)
Vanhu vane mhosva yekurambana zveunyengeri (10-17)
“‘Ndinovenga kurambana,’ anodaro Jehovha” (16)
2 “Iye zvino imi vapristi, ndimi muri kupiwa murayiro uyu.+ 2 Kana mukaramba kuteerera, uye kana mwoyo yenyu ikasava nebasa nekukudza zita rangu,” anodaro Jehovha wemauto, “ndichaunza kutukwa pamuri,+ uye ndichachinja zvikomborero zvenyu kuti zvive kutukwa.+ Chokwadi ndaita kuti zvikomborero zvive kutukwa, nekuti hamusi kuisa zvinhu izvi mumwoyo menyu.” 3 “Inzwai! Ndichaparadza mbeu yenyu yamakadyara pamusana pemaitiro enyu,+ uye ndichazora ndove pazviso zvenyu, ndove yepamitambo yenyu; uye muchaendeswa kwairi.* 4 Muchabva maziva kuti ndakupai murayiro uyu kuti sungano yangu naRevhi irambe iripo,”+ anodaro Jehovha wemauto. 5 “Sungano yangu naye yaiva yeupenyu nerugare, izvo zvandakamupa zvakabatana nekutya.* Ainditya, chokwadi aitya zita rangu zvikuru. 6 Mutemo* wechokwadi waiva pamuromo pake,+ uye kusarurama hakuna kuwanikwa pamuromo pake. Akafamba neni nerugare nekururama,+ uye akadzora vazhinji achivabvisa pane zvakaipa. 7 Nekuti muromo wemupristi ndiwo unofanira kuchengeta ruzivo, uye vanhu vanofanira kutsvaga mutemo* kubva mumuromo make,+ nekuti ndiye nhume yaJehovha wemauto. 8 “Asi imi makatsauka muchibva munzira. Makaita kuti vakawanda varege kuteerera mutemo.*+ Makaparadza sungano yaRevhi,”+ anodaro Jehovha wemauto. 9 “Saka ndichaita kuti muzvidzwe uye muve vanhu vepasi pakati pemarudzi ese, nekuti hamuna kuchengeta nzira dzangu, asi makava nerusarura pakushandisa kwamaiita mutemo.”+ 10 “Hatina baba vamwe chete here?+ Hatina kusikwa naMwari mumwe chete here? Saka nei tichinyengerana,+ tichisvibisa sungano yemadzitateguru edu? 11 Judha anyengera, uye pane chinhu chinosemesa chaitwa muIsraeri nemuJerusarema; nekuti Judha asvibisa utsvene hwaJehovha+ hwaanoda,* uye atora mwanasikana wamwari wekune imwe nyika kuti ave mwenga wake.+ 12 Jehovha achaparadza munhu wese wemumatende aJakobho anoita izvi, pasinei nekuti ndiani, kunyange achipa mupiro kuna Jehovha wemauto.”+ 13 “Pane chimwe* chamunoita, chinoita kuti atari yaJehovha izare nemisodzi, nekuchema nekugomera, zvekuti haasisina basa nemipiro yenyu uye haachafariri chero chinhu chamunopa.+ 14 Uye munoti, ‘Nemhaka yei?’ Nekuti Jehovha akava chapupu pakati pako nemudzimai weudiki hwako, wawakanyengera, kunyange zvazvo ari mumwe wako uye mudzimai wako wesungano.*+ 15 Asi pane mumwe asina kuita izvi, nekuti aiva nemweya waMwari wakanga wasara. Iyeye aifunga nezvei? Vana vaMwari.* Saka chenjererai mwoyo* yenyu, uye mumwe nemumwe wenyu ngaarege kunyengera mudzimai weudiki hwake. 16 Nekuti ndinovenga* kurambana,”+ anodaro Jehovha Mwari waIsraeri, “nemunhu wese anoita mhirizhonga,”* anodaro Jehovha wemauto. “Chenjererai mwoyo* yenyu, uye regai kunyengera.+ 17 “Makanetesa Jehovha nemashoko enyu.+ Asi imi munoti, ‘Takamunetesa sei?’ Nekutaura kwenyu kuti, ‘Munhu wese anoita zvakaipa akanaka kuna Jehovha uye anomufarira,’+ uye nekutaura kuti, ‘Ko Mwari wekururama ari kupi?’”
^ Kureva, kunzvimbo yairaswa ndove yemhuka dzaibayirwa.
^ Kana kuti “nekuremekedza kukuru.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “varege kuteerera nedzidziso dzenyu.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “nzvimbo tsvene yaJehovha yaanoda.”
^ ChiHeb., “chechipiri.”
^ Kana kuti “wawakabatanidzwa naye nemutemo.”
^ ChiHeb., “Mbeu yaMwari.”
^ ana kuti “anoita kuti nguo yake izare nemhirizhonga.”